तपाईंको अर्को वेबसाइट को निर्माण गर्नेछ? | Martech Zone
तपाईंको अर्को वेबसाइट को निर्माण गर्नेछ?
शुक्रबार, डिसेम्बर 28, 2018 शुक्रबार, डिसेम्बर 28, 2018 Douglas Karr
म आज एक संक्रमणकालीन अनुभवी संग एक महान कुराकानी थियो जो विकास मा डुबकी लिन उत्सुक थियो। ऊ निराश थियो किनकि उसले जुनियरको लागि आवेदन गरिरहेको थियो फ्रन्ट-एन्ड विकासकर्ता क्षेत्र मा रोजगार तर अयोग्य र पराजित महसुस बाहिर हिंडे। मैले उसलाई प्रोत्साहित गरें कि मुद्दा उसको योग्यता होइन, यो हाम्रो उद्योग भित्रको भ्रम हो।
पछिल्ला दुई दशकहरु सम्म, म अनलाइन मार्केटि wall पर्खाल को सबै पक्षहरुमा बसेको छु - एकीकरण मा परामर्श र विकास सहित, प्रयोगकर्ता अनुभव को लागी प्रयोगकर्ता इन्टरफेस को डिजाईन र परीक्षण सहित, उत्पाद सुविधाहरु को विकास र प्राथमिकता उत्पाद उत्पादन, फिर्ता, अन्त विकासकर्ता, अगाडि -end विकासकर्ता, र डिजाइनर पनि। हाम्रो उद्योगमा मैले देखेको धेरै निराश र भ्रम हो कि शब्दावली अस्पष्ट छ र वर्णन प्रायः ओभरल्याप हुन्छ।
उनले सोचे कि जुनियर फ्रन्ट-एन्ड विकास काम क्यारियर निर्माण वेबसाइटहरूमा उत्कृष्ट प्रविष्टि-बिन्दु हुन सक्छ। उनले फ्रन्ट-एन्ड विकासलाई प्रयोगकर्ताको सौंदर्यशास्त्र र अन्तर्क्रियासँग सम्बद्ध गरे। मैले बुझाउनु पर्‍यो कि त्यो सत्य हो, कसैले पनि उनीहरूको वेबसाइटलाई पुनः डिजाइन गर्न फ्रन्ट-एन्ड विकासकर्ताको लागि राख्दैन। त्यो उच्च केन्द्रित स्थिति हो जुन सामान्य रूपमा ठूला कम्पनीहरूको लागि वेब अनुप्रयोग प्रयोगकर्ता अनुभवहरू डिजाइन गर्दछ।
कुन कार्य शीर्षकले वेबसाइटहरू निर्माण गर्दछ?
त्यसोभए तपाइँ विश्वास गर्नुहुन्छ कि तपाइँलाई नयाँ वेबसाइट चाहिन्छ। के तपाई भाडामा लिनुहुन्छ? वेब विकासकर्ता? के तपाई भाडामा लिनुहुन्छ? वेब डिजाइनर? के तपाई भाडामा लिनुहुन्छ? बजार सल्लाहकार? कसरी एक को बारे मा SEO सल्लाहकार?
जब कम्पनीहरूले माथिका मध्ये कुनै एकमा सम्झौतामा संलग्न हुन्छन्, चीजहरू प्रायः खराबमा बदल्छन्। निराशा तब हुन्छ जब अपेक्षाहरू पूरा हुँदैनन्। म केहि वास्तविक-विश्व उदाहरणहरू प्रदान गर्दछु।
हामीले एउटा भाडामा लिएका हौं वेब डिजाइनर। साइट सुन्दर छ, तर हामीले कुनै लीड पाइरहेका छैनौं।
हामीले एउटा भाडामा लिएका हौं विकासकर्ता / प्रोग्रामर। हामीले धेरै पैसा खर्च गरे तर साइट एकदम बग्गी हो र यो अझै कार्यान्वयन भएको छैन।
हामीले एउटा भाडामा लिएका हौं बजार एजेन्सी। नयाँ साइट राम्रो छ तर यो वास्तवमै ढिलो छ र हामीले ट्राफिकको एक टन हरायौं।
हामीले एउटा भाडामा लिएका हौं ग्राफिक डिजाइनर। हाम्रो ब्रान्डि aw अद्भुत छ तर हाम्रो साइट डरलाग्दो छ र हामी केहि पनि कसरी अद्यावधिक गर्ने भनेर पत्ता लगाउन सक्दैनौं।
हामीले एउटा भाडामा लिएका छौं SEO सल्लाहकार। हामी अब धेरै धेरै उद्योग सर्तहरूको लागि र्यान्क गर्छौं, तर यसले कुनै अतिरिक्त व्यवसायको लागि नेतृत्व गरेको छैन।
प्रत्येक चोटि कम्पनी नयाँ वेब उपस्थिति निर्माण गर्न बाहिर जान्छ, अपेक्षा जहिले पनि त्यस्तै हुनुपर्दछ ... तिनीहरूको व्यवसाय बढ्दै र उनीहरूको लगानीमा सकारात्मक प्रतिफल।
कहिलेकाँही, यो एक अत्यधिक आकर्षक साइट भएको छ जुन तपाईंको ब्रान्डको सचेतना निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ। कहिलेकाँही अपेक्षा तपाईको व्यक्तिगत वा कर्पोरेट अधिकार निर्माण गर्नु तपाईको उद्योगमा छ। धेरै चोटि, आशा तपाइँको बिक्री टीम को लागी अधिक लीड प्राप्त छ। यदि तपाईं इकमर्स साइट हुनुहुन्छ भने यो अधिक यातायात ड्राइभ अधिक रूपान्तरण हो।
ग्याप अपेक्षाहरू हुन्
के तपाईंले याद गर्नुभयो जुन ती अपेक्षाहरूका साथ उल्लेख गरिएको थिएन?
साइट सौन्दर्य रूपमा सुन्दर छ र मेरो ब्रान्डको पूर्ण रूपमा चित्रण गर्दछ।
साइट उत्तरदायी छ र मेरो लक्षित श्रोता (हरू) को लागि नेविगेट गर्न र उनीहरूलाई आवश्यक जानकारी फेला पार्न राम्रो डिजाइन गरिएको छ।
साइट छिटो छ र खोज ईन्जिनको लागि सही अभ्यासहरूको सही अनुक्रमणिकामा प्रयोग गर्दछ।
साइट जानकारीमूलक छ, मेरो संभावनाहरू खरीद निर्णय लिन मद्दतको लागि आवश्यक सामग्री प्रदान गर्दछ।
साइट प्रयोग गर्न सजिलो छ, लचिलोपनको साथ भविष्यमा हामीले आवश्यक पर्ने परिवर्तनहरू गर्न।
साइट हाम्रो अन्य प्रणालीहरूमा एकीकृत छ, बिक्री, मार्केटिंग, समर्थन, र अन्य प्रणालीहरू बीच डाटा सार्न आवश्यक प्रयास घटाउँदै।
साइट सोशल मिडियाको लागि अप्टिमाइज गरिएको छ, मेरा समर्थकहरूलाई राम्रोसँग फर्म्याट गरिएको अपडेटमा सजिलैसँग जानकारी साझा गर्न सशक्त बनाउँदै।
साइटले हाम्रो समग्र डिजिटल मार्केटिंग प्रयासहरूको एक भागको रूपमा राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको छ। हाम्रो रिपोर्टि and र हामीले पाएका ड्यासबोर्डहरूले हामीलाई निरन्तर अनुकूलन गर्न र हाम्रो प्रस्तावहरूलाई सुधार गर्न मद्दत गर्दछ।
यी सबै लक्ष्यहरू प्रायः तपाईको [यहाँ सम्मिलित शीर्षक] सँगको बैठकहरूमा छलफल हुँदैन, तर ती हुनुपर्दछ। समस्या यो छ कि प्रतिभाको लागि बजार ठाउँ प्राय: फ्र्याक्चर हुन्छ। ग्राहकहरू जुन मसँग काम गर्दछ त्यसले प्राय: सयौं हजारौं डलर खर्च गरेको हुन्छन् आन्तरिक जनशक्ति र बाह्य स्रोतहरू बीच… र कहिल्यै भेट्दैनन् लक्ष्य माथि।
यदि तपाइँ डेभलपर वा प्रोग्रामर राख्नुहुन्छ भने, ती विकासकर्ताको अपेक्षा प्राय: तिनीहरू खाली खाली सम्पादकबाट सुरू गर्न र तपाइँले अनुरोध गर्नुभएको कोडको हरेक लाइन लेख्ने छन। त्यो आजकल पागलपन हो। मैले शाब्दिक रूपमा टस गरेको कोड जुन विकास गर्न बर्ष लाग्यो र सयौं हजारौं डलर समाधानको लागि सयौं डलर भयो। म यसको लागि प्रोग्रामरलाई दोष दिइरहेको छैन, उनीहरू प्रोग्रामरले के गरिरहेका छन्। समस्या अपेक्षामा खाली रहेको छ।
यदि तपाइँ डिजाईनर राख्नुहुन्छ भने, तपाइँको साइट सौन्दर्य रूपमा तेजस्वी हुन सक्छ। तर तीनिहरूले हार्ड-कोड एलिमेन्टहरू पनि गर्न सम्भव बनाउँदछन्। तिनीहरूले असम्पीडित इमेजरी प्रयोग गर्न सक्दछन्, साइट ढिलो लोड हुने बनाउन। र तिनीहरूले वास्तवमा यसलाई लिस्ट क्याप्चरको लागि समाधानमा समाहित गर्न सक्दैनन्। मैले एक पटक ग्राहकले मलाई उनीहरूको नयाँ, सुन्दर साइट लाइभ भएको महिना पछि सम्पर्क गरे। तिनीहरू बुझ्न सक्दैनन् किन किन यसले कुनै सीसा पैदा गरेको छैन र मलाई मद्दतको लागि भाडामा लिएको छ। केही मिनेटमा, मैले फेला पारे कि उनीहरूसँग रहेको फारम शुद्ध सौंदर्य थियो र वास्तवमा कतै डाटा पेश गरेन। तिनीहरूसँग सयौं लीडहरू हुन सक्छ ... तर तिनीहरूसँग फेला पार्न कुनै तरिका थिएन। डिजाइन एजेन्सी तिनीहरूको अपेक्षाहरू पूरा… तर व्यापार आवश्यकता छैन।
धेरै भन्दा पहिले, म साइटहरू को रूपमा बेचिएको देख्छु परियोजनाहरू। नतिजाको रूपमा, एजेन्सी, डिजाइनर, वा विकासकर्तालाई समय बचत गर्न र स on्लग्नतामा राम्रो नफा कमाउनको लागि हरेक सर्टकटमा लिने साइट लिनेलाई आर्थिक रूपमा पुरस्कृत गरिन्छ। र, अवश्य पनि, परियोजना सबैभन्दा तल्लो (वा न्यूनतम बिडकर्ता पछि) मा जान्छ। कम्पनीहरूले कहिले काँही तिनीहरू यो पक्का गर्छन् कि उनीहरूसँग पच्चीस हजार डलर साइट छ र तिनीहरूले केही हजार डलरमा उनीहरूको निर्माण गर्न सक्षम छन्। म कसरी यो तिनीहरूको व्यवसाय को लागी प्रदर्शन भनेर सोध्नुहोस् र प्रतिक्रिया अक्सर छ ... ओह, हामी हाम्रो व्यवसाय को सबै भन्दा प्राप्त मुखको कुरा.
राम्रो duh। तपाईंको सस्तो साइट बेकार छ। तपाईंले पैसा फ्याँक्नुभयो। यदि तपाईंले २$,००० डलर लगानी गर्नुभयो भने, तपाईंले भाँडामा लिनु भएको संसाधनको क्षमताको आधारमा तपाईंले आफ्नो व्यवसायको वृद्धिलाई दोगुना पार्नुभएको हुन सक्छ।
एक मार्केटिंग संसाधन किराया जो तपाइँको व्यापार आवश्यकताहरु बुझ्दछ र दर्शकहरु र अनुसन्धान गर्न को लागी हासिल गर्न कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ कि प्राप्त गर्न को लागी एक धेरै राम्रो लगानी हो। एक व्यक्ति वा संस्था जसले सामग्री, अनुसन्धान, डिजाइन, विकास, एकीकरण, विश्लेषक, उपकरणहरू र प्लेटफर्महरूको ल्यान्डस्केप, एकीकरण, साथै सामाजिक, खोज, मोबाइल, विज्ञापन, भिडियो, एट सेटेरा… को प्रवृत्ति बुझ्दछ। तपाईंको अनलाइन मार्केटिंग आवश्यकताहरूको लागि।
तर त्यो प्रायः डिजाइनर न एक विकासकर्ता हो।
यस अनुभवीलाई मेरो सल्लाह? उहाँलाई सम्मानजनक डिस्चार्ज गरिएको थियो त्यसैले हामीलाई थाहा छ कि उसको चरित्र र कामको नीति राम्रो छ। उनले आफ्नो ईन्स्टलिमेन्टको बखत र पछिको विश्वव्यापी रूपमा यात्रा गरे, त्यसैले उनीसँग ठूलो व्यवसायिक ज्ञान र अरु कसैसँग अनुभव छैन। उहाँ उत्कृष्ट र आकर्षक कम्युनिकेटर हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग कुरा गर्दा मेरो आनन्द लाग्यो।
उनले स्वीकार गरे कि उनी सोच्दैनन् कि उनी दिनभर स्क्रिनको अगाडि बस्न सक्छन र लिखित कोड लेख्छु त्यसैले मैले उनलाई सल्लाह बन्ने लक्ष्यलाई त्याग्न सल्लाह दियो। विकासकर्ता। त्यसो भन्दैमा मैले उसलाई त्याग्न सल्लाह गरें विकास, मलाई लाग्छ कि उसले त्यहाँ निर्माण विशेषज्ञताको पछि लाग्नु पर्छ। म विकासको एक टन गर्छु, तर यो कहिल्यै होइन आशा मेरो ग्राहकहरु को। तिनीहरू व्यापार परिणामहरू चाहन्छन्, कोड होइन।
मेरो उद्योगमा ज्ञान र विशेषज्ञताको विस्तृत दायरा विकास गरेर, म उनीहरूको लगानीलाई प्राथमिकता दिन सक्षम छु जहाँ यो उच्च आरओआई प्राप्त गर्न गइरहेको छ। तपाईलाई राम्रो डिजाइनर, उत्तम विकासकर्ता, उत्तम एसईओ परामर्शदाता, उत्तम जो पनि पनि भेट्टाउनु पर्दैन वा तपाईलाई उनीहरूको आवश्यक पर्दा ती स्रोतहरू भेट्टाउन सक्नुहुन्छ। तपाईंको प्राथमिक लक्ष्य जब तपाइँको अर्को वेबसाइट निर्माणको लागि कसैलाई काममा लगाउनु भनेको कसैलाई खोज्नु हो जुन तपाइँको व्यवसाय बुझ्छ।
म मेरा ग्राहकहरूको लागि वेब साइटहरू निर्माण गर्दिन, म धेरै सम्पत्तीहरू प्रयोग गर्दै व्यापार परिणामहरू निर्माण गर्दछु ... वेब साइट सहित।
टैग: फ्रन्ट-एन्ड विकासकर्ताuiवेबसाइट विकासकर्तावेबसाइट परियोजना